Anthony Martial Oo Heshiis Cusub Qalinka Ku Duugaya, Sanadaha Uu Saxeexi Doono & Sababta Uu Iskaga Ilaaway Colaada Ka Dhaxaysa Isaga Iyo Jose Mourinho Oo La Ogaaday. – GOOL24.NET
Da’yarka kooxda Manchester United iyo xulka qaranka France ee Anthony Martial ayaa lagu wadaa inuu heshiis cusub qalinka ugu duugi doono kooxdiisa xilli la ogaaday sababta ku kalifaysa inuu heshiiskan saxeexo iyo inuu iska ilaawo colaada dhawaanahan kala soo dhaxaysay tababaraha kooxdiisa ee Jose Mourinho.
Manchester United ayaa la sheegayaa inay heshiis cusub oo mudo SHAN sano ah kusii haynaya Old Trafford walow ay sidoo kale jiraan in tababare Mourinho uu doonayo inuu 22 jirkan ka diro kooxda maadaama oo ay si cad iskugu dhaceen kulamadii saaxiibtinimo ee xilli ciyaareedka kahor.
Cadhada uu Jose Mourinho u qabo Martial ayaa si weyn usii xoogaysatay kaddib markii uu wakiilka xiddigan ee Philippe Lamboley uu si cad saxaafada ugu sheegay in xiddiga uu wakillka ka yahay uu jeclaan lahaa bixitaan kaddib markii laga reebay safkii xulka France ee kusoo guuleystay koobka aduunka.
Si kastaba, Manchester United waxa ay go’aan ku gaadhay inay xiddigan ka saxeexato heshiis uu kooxda kusii joogayo ilaa sanadka 2023, Martial ayaa haatan galay 12-kiisii bilood ee ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa afarta sano ah walow uu haysto dookh ah inuu sanad kale ku darsan karayo.
Sababta ugu weyn ee Anthony u saxeexayo qandaraaskan ayaa lagu sifeeyay inuu ku rajo weyn yahay in Jose Mourinho laga caydhiyo shaqada kooxda isla markaana uu isagu kusii waari doono Old Trafford isla markaana uu si fiican u qancin doono tababaraha xiga.
Ugu dambayn, Xilka tababarenimo ee uu Mou ka hayo Old Trafford ayaa mugdi weyn ka jira kaddib markii uu guuldaraystay laba kamid saddexdii kulan ee ilaa haatan laga ciyaaray horyaalka.